बाँके आगलागीकाे दर्दनाक अवस्था ! « Janata Samachar
बाँके आगलागीकाे दर्दनाक अवस्था !
बाँके । नरैनापुरमा आगलागी हुँदा ७३ वटा घर र ३७ बटा गोठहरु जलेका छन् । नरैनापुर ४ खोदवामा शनिबार दिउँसो ३ बजे तिर फकिरे पठानको खरले छाएको कच्ची घरमा अचानक आगलागी भइ अन्य आसपासका घरहरुमा पनि आगो सल्किएको थियो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ र बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानासहितको सुरक्षा निकाय प्रमुख प्रभावित क्षेत्रमा उद्वार र प्रतिकार्यमा खटिएका थिए । आगलानीको खबर प्राप्त हुनासाथ नरैनापुर गाउँपालिकाको एउटा र नेपालगञ्ज उपमहानरपालिकाको २ वटा दमकल र कोहलपुर नगरपालिकाको एउटा दमकलले आगो निभाएका थिए । आगलागी के कारणले भयो भन्ने बारेमा स्थानीयहरु नै अनभिज्ञ रहेका छन् ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय, रेडक्रसलगायको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीबाट नरैनापुर ४ का ५५ वर्षका मिश्रीलाल पासी, उनकी पत्नी ५२ वर्षकी मायावाती पासी र ३५ वर्षकी गुणवाती पासी आगोले जलेर घाइते भएका थिए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाँके र स्थानीय ब्यापरी र अन्य ब्यक्तिहरुद्वारा आज राहत लिएर नरैनापुर पुर्याउने तयारी समेत भैरहेको छ। गए राति प्रभावित क्षेत्रमा प्रशासनले ४० थान टेन्ट, चिउरा ८६० किलो, २५० किलो भुजा, २ हजार ४ सय प्याकेट चाउचाउ, १ हजार ४०० प्याकेट बिस्कुट, ६० काटुन पानी पठाइएको थिायो । गाउँपालिकाले आगलागी हुनबाट जोगाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारकाे पनि केही सहयोगको अपेक्षा राखेको गाउँपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद शाहले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले राहात सहयोगका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नरैनापुर गाउँपालिकामा यो वर्ष आगलागी भएको यो पाँचौ पटक हो । यसको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नका लागि खरका छाना भएका घरहरुको पुन: स्थापना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । अन्यथा यो समस्या सधैभरी बल्झिरहने देखिएकाे छ ।